Mucaaradku ma Rooble ayey u socdaan mise madaxda gobolleedyada? | Dayniile.com
Home Warkii Mucaaradku ma Rooble ayey u socdaan mise madaxda gobolleedyada?
Doorashada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan soo idlaatay, iyadoo dhinaca kale laba kursi laga doortay midda Golaha Shacabka.
Previous articleIsbitaalka deegaanka Saddex-higlo oo markale dib loo howlgeliyay
Next articleErgayga Gaarka ah ee Xuquuqda Carruurta iyo Tahriibayaasha Ambassador Mariam Yaasiin oo soo dhawaysay Tahriibayaal
Joe Biden invited Taiwan to a conference of more than 100 countries - a move that has provoked outrage from authoritarian, unofficial China. Taiwan thanked...
Midowga Musharixiinta ku mideysan oo goor dhawayd soo saaray Qoraal ay...